के पैसा साट्दै हुनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहाेस् यस्तो छ आजको दरभाउ | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more के पैसा साट्दै हुनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहाेस् यस्तो छ आजको दरभाउ
के पैसा साट्दै हुनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहाेस् यस्तो छ आजको दरभाउ
मंसिर ९ गते, २०७६ - १४:०९
काठमाडौं । आज विदेशी मुद्राको भाउ स्थिर रहेको छ । आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११४ रुपैयाँ ४४ पैसा तथा बिक्रिदर ११५ रुपैयाँ ०४ पैसा रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रिदर १४७ रुपैयाँ ६३ पैसा रहेको छ।
साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ५२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको छ। त्यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ।
युएई दिराम एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ४३ पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ५७ पैसा रहेको छ।
कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ७६ रुपैयाँ ८३ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय ७८ रुपैयाँ ८१ पैसा रहेको छ । बहराईन दिनार एकको खरिददर ३ सय ३ रुपैयाँ ५६ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय ५ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ।
यस्तो छ राष्ट्र बैंकले ताेकेकाे विनिमयदर तालिका
मंसिर ९ गते, २०७६ - १४:०९ मा प्रकाशित
सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, तोलामा कति पुग्यो ?
सैनिक कल्याणकारी कोषको सम्पत्ति ५१ अर्ब ६१ करोड, एकै बर्षमा सात अर्ब २९ करोड वृद्धि
सुनको मुल्यमा ऐतिहासिक रेकर्ड, प्रतितोला झन्डै एक लाख
सुनको मूल्यमा फेरि अर्को रेकर्ड !
आजपनि सुनको भाउमा नयाँ रेकर्ड : प्रतितोला एक लाख नजिक
एक वर्षमा साढे ३२ हजारले बढ्यो तोलामा सुन
सुनको मूल्यमा फेरि नयाँ कीर्तिमान, तोलाको साढे ९७ हजार
आइतबार सुनको मूल्य हालसम्मकै महँगो, तोलामा कति पुग्यो ?
सुनको मूल्यमा आज पनि नयाँ रेकर्ड, तोलाको कति पुग्यो ?